DOWNLOAD က de Havilland ကနေဒါ DHC-1 Chipmunk FS2004 - Rikoooo
အရွယ် 11.36 ကို MB
downloads ရယူရန္7919
Author: Rick Piper, Dave Booker, Saverio Maurri
ဒါကတစ်ခုစံပြလေယာဉ်ပျံများနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ပါ! ကျနော်တို့ကပိုမပြောနိုင်, ကကြိုးစားပြီး! 13 repaints အတွက်ရရှိနိုင်။ လေယာဉ်မှူးနီးပါးအစစ်အမှန်ဖြစ်တယ်, သူ့ကိုရွေ့လျားကိုကြည့်! ထိပ်တန်းလေယာဉ်တင်။ ထိပ်တန်း panel က။ ဂရိတ်အသံ။ အရည်အသွေးအလုပျအတှကျစာရေးသူမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ထို့အပြင် (ပြင်သစ် chipmunk အတွက်) Chipmunk အဖြစ်လူသိများအဆိုပါက de Havilland ကနေဒါ DHC-1, သေးငယ်တဲ့ monoplane ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ 22 မေလ 1946 အပေါ်၎င်း၏ပထမဆုံးပျံသန်းမှုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
Chipmunk တစ်ဦးနှစ်ဦးကိုထိုင်ခုံနေရာ Single-အင်ဂျင်ကိုလေယာဉ်, Post-ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးမှတဆင့်တော်ဝင်လေတပ်နှင့်အခြားလေကြောင်းတပ်ဖွဲ့များတော်ဝင်ကနေဒါလေတပ်၏အဓိက drive ကိုသောအခြေခံလေ့ကျင့်ရေးလေယာဉ်တစ်စင်းသည်။ အဆိုပါ Havilland Chipmunk ပထမဦးဆုံးစစ်မှန်တဲ့လေကြောင်းစီမံကိန်းကို Post-စစ်က de Havilland ကနေဒါဖြစ်ခဲ့သည်။
ယနေ့ 500 DHC-1 ကျော် (လည်း "Chippie" အဖြစ်လူသိများ) Chipmunk airworthy ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။